Askari maanta lagu dilay magaalada Muqdisho iyo ciidanka dowlada oo toogtay ninkii ka dambeeyey
Nin hubeysan ayaa maanta askari ka tirsan ciidanka dowlada ku toogtay agagaarka xarunta wasaarada gaashaabdhiga ee magaalada Muqdisho.
Goob joogayaal ayaa sheegay in ninka askariga dilay uu markii dambe ku baxsaday mooto uu la socday markii uu dilkaas fulinayey.
Hase ahaatee ciidamo ka tirsan dowlada oo ku sugnaa meel aan ka fogeyn goobta askarigaas lagu toogtay ayaa gaari dagaal ku eryaday ninkaas iyagoo ugu dambeyn ka daba tegay wadada dhexdeedana ku dilay.
Meydka ninkaas iyo mootadii uu ku baxsan rabay ayaa muddo saacado ah yiilay goobta lagu dilay, waxaana markii dambe ka qaaday goobta dad halkaas ku dhowaa.
Dhowaan ayey aheyd markii ciidamada dowlada ay suuqa Bakaaraha ku dileen nin hubeysan oo dilay askari xili uu isku dayeyey inuu halkaas ka baxsado.